OromoRevolution : Bulchiinsa Mootummaa Wayyaanee Magaalaa Finfinnee - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromoRevolution : Bulchiinsa Mootummaa Wayyaanee Magaalaa Finfinnee
OromoRevolution Bulchiinsa Mootummaa Wayyaanee Magaalaa Finfinnee argamuun Konsertiin Artistiin Kabajamaafi Jaalatamaa Oromoo Haacaaluu_Hundeessaan Hoteela Giyoonitti Qarshii Miliyoonaa Lamaan Qopheeffamaa ture hayyaama dhorkachuun haqamee jira. Gootichi Artistiin Oromoo Dhaabbata Promotionfi Hoteelaa Giyoon Waliin waliigaltee qarshii miiliyoon lamaan uummee Konsertii Muuziqaa Uummataaf dhiyeessuuf turee ugguramee jira. Dhalootni qaroon Oromoo Artistii Haacaaluu Hundeessaa agarsiisaa artii Oromoo Argisiisuufi Artii Oromoo Guddisuuf nama tattaafatu bulchiinsi Magaalaa Finfinnee dhorkuun yeroof akka hin milkoofnee ta’ee jira. Maallaqa kanfaltii Duraa qarshii Miliyoona tokkoo (1,000,000.00) Artisti Haacaaluun dhaabbata promotion irraa fudhatees Konsertiin isaa waan haqameef deebisee jira.
Abbaan Irree Wayyaannee Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee ofiin jedhu Artistii Haacaaluu Hundeessaa duubaa uummatni Oromoo miliyoonni 50 hiriiree jiraachuu hubachuu qabdi, artistii Oromoo dura dhaabbachuun Uummata Oromoo Miliyoona 50 fi sabaaf sablamoota biyyaatti jaalattoota artii Oromoo dura dhaabbachaa akka jirtu beekamaadha.
Karaa: Seenessaa Qeerroo
የአዲስ አበባ አስተዳደር የእውቁን ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳን የሙዚቃ ኮንሰርት አገደ
(ዘ-ሐበሻ) በቅርቡ ጅራ የተሰኘ ነጠላ ዜማውን የለቀቀውና በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ምርጥ ድምጻውያን መካከል በቀዳሚዎቹ መካከል ስሙ የሚጠራው ሃጫሉ ሁንዴሳ በአዲስ አበባ ሊያደርገው የነበረው የሙዚቃ ኮንሰርት ልክ እንደ ቴዲ አፍሮ መታገዱ ተሰማ::
በአዲስ አበባ ባለፉት 2 ወራት ውስጥ ሁለት ትላልቅ ኮንሰርቶች የተደረጉ ሲሆን ልክ እንደ ቴዲ አፍሮ ሁሉ የሃጫሉ ሁንዴሳም ኮንሰርት መታገዱ እያነጋገረ ነው::
ከሃገር ቤት የሚተላለፈው ኢትዮፒካሊንክ የራድዮ ፕሮግራም በዝርዝር የዘገበውን ይመልከቱት::
[23 03 2010] Ganaa har’a Ummanni Oromoo Sirna Bulchiinsa isaa demookiraatawaa ta’e Sirna Gadaa Galmee dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii (UNESCO) irratti galmaa’edha. Guyyaan kun guyyaa injifannootti jechun ni danda’ama. Sirni Gadaa xiyyeeffannoo Ummataa Oromoo qofa osoo hin tanee har’a Ummanni Addunyaas eegannoo kan godhaniif ta’a. Ummanni Oromoo sirna bulchiinsa bareedaa ta’e kana har’aan gahee jira, amma immoo ummanni addunyaas qooda qabu.
Guyyaa kana sababeeffachuun Godina Booranaa Ardaa Jilaa Qakeeti kabajamee oolee jira.
Ardaa jilaa Dhakaa Qakee dira Yaaballaa Boraanaa Doloolloo Hoolaa fi diida garbi jidduu fulaan argama isaa!
Dhaabbati GAAYOO galata qabdan ka misooma ardaa jilaatti qajeeltan!
Horraa bullaa debaanaa jillaan demmaa.
Via: Ijoollee Booranaa